Hoyga - Hands Off!
gacmaha ka baxa
Soo dhawoow on Gacmaha oo la joojiyo - jooji xadgudubka carruurta
Waxaa naga go'an inaan ka hortagno oo aan ka ilaalino xadgudubka galmada ee carruurta.
Ka mid noqo kooxda
Waxaan ku faraxsanahay qof walba oo na taageera oo raba inuu carruurta ka hortag ahaan uga hortago.
Ku soo biir kooxda
Diiwaankayagu wuxuu ka kooban yahay in ka badan 5000 oo falanqeyn ah oo ku saabsan joornaalada joornaalada ee ku saabsan xadgudubka galmada ee carruurta.
Ku deeqo hadda sabab wanaagsan!
Ku deeqo kasta waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo gaari lahaa dad badan isla markaana loo caawin lahaa carruur badan.
Carruurta iyo dadka waaweyn waa inay aqoonsadaan astaamaha xadgudubka galmada iyo sidoo kale ku xadgudubka, dembiilayaasha sadistic iyo kuwa u janjeedha xagga galmada waqti ku habboon. Waxaan dooneynaa inaan gacan ka geysano tan iyada oo loo marayo shaqada waxbarashada iyo ka hortagga.
Ku guuleystey Janaayo 2021
Taageerayaashu way na caawiyaan maalin kasta
Waxaa naga go'an ilaalinta caruurta dhowr sano
Waxaan ka shaqeyneynaa buug loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 3-7 si looga ilaaliyo rabshadaha galmada. Buuggu wuxuu u fududeynayaa ka hortagga carruurta, waalidiinta, laakiin sidoo kale macallimiinta iyo dhammaan dadka la shaqeeya carruurta maalin kasta.
Ururka "Gacmaha Away - Jooji Xadgudubka Caruurta" wuxuu ka shaqeeyaa inuu hubiyo in buugan laga heli karo bilaash xarumaha xanaanada caruurta, iskuulada iyo waalidiinta.
Si aan u gaarno 56 xanaanooyinka iyo xarumaha xanaanada caruurta ee Jarmalka, 000 Switzerland iyo 15 ee Austria oo ay ku jiraan in ka badan hal milyan oo caruur ah, waxaan u baahanahay taageero maaliyadeed oo ku saabsan kharashka daabacaadda iyo qeybinta Wadamada ku hadla af jarmalka waxaa jira kudhowaad 000 oo ah dugsiyo hoose iyo hoose oo ay dhigtaan kudhowaad 10 oo arday oo dhigta fasalka koowaad oo waliba u baahan in wax la baro
Boggayaga internetka waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ururkeenna iyo sidoo kale www.leoloewe.com dareenkii ugu horreeyay ee mashruuca buugga.
Guddiga Maamulka ee Ururka, Aabbaha iyo Muwaadinka,
Kiisaska la falanqeeyay
Adiga la'aanteed ma shaqeynayso!
Waxay ku jirtaa gacmahaaga!
95% deeqaha oo dhan waxay toos u aadaan carruurta
Ku deeqidaada ilaalinta ilmaha
Dhammaan deeqaha ayaa si toos ah ugu socda ka hortagga rabshadaha galmada
Waxaa kor loo qaaday $ 15,000
Himilada $ 150,000
WAA LAGU ballanqaaday
Xitaa maanta dadka badankood waxay u eegaan dhinaca kale markay tahay arrintaan naxdinta leh iyo sidaas darteed mowduuc tab ah.
Shaqadayada waxaan dooneynaa inaan gacan ka geysano xaqiiqda ah in carruurta oo keliya laakiin sidoo kale dadka waaweyn ay aqoonsan karaan astaamaha xadgudubka galmada iyo sidoo kale kufsiga, sadbiilayaasha iyo dembiilayaasha xagga galmada ku habboon ee waqtiga wanaagsan isla markaana si habboon ula falgala. Waa in awood loo siiyaa inay ka hadlaan (laakiin marna dambiilaha laftiisa, maxaa yeelay taasi waa u digi lahayd).
Waa inay cadaato in cadaalada feejignaanta aysan aheyn ikhtiyaar. Si kastaba ha noqotee, qof walba waa inuu ogaadaa inay dhib badan yihiin ama ciqaabi karaan haddii ay jiraan aqoon ku saabsan xadgudub, tan laakiin aan lagu soo wargalin maamulka ilaalinta ilmaha ama booliska wird.
WAA KU SAMEE Meelkastoo ay ka jirto bulshadayada
Iyadoo websaydhka Hands Off waxaan ku muujineynaa baaxadda mowduucan degmo kasta ama magaalo kasta oo ku taal Jarmalka, Austria, Switzerland iyo adduunka oo dhan.
Taxanaha filimka "Sonkorta HowlgalkaAtariishada weyn ee Nadja Uhl ama filimkaXisbiga ugaarsiga"Si fiican u matala caqabadaha. Nasiib darrose, mas'uulkii ugu weynaa ee mas'uul ka ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Jarmalka, Thomas de Maizière, wuxuu haystaa dukumintiga"Saxon waraabe”In laga tirtiro dhamaan maktabadaha warbaahinta ee ARD.
Filimka waxaa lagu soo bandhigay 20: 15 pm fiidkii dooda dooda Sandra Maischberger si faahfaahsan looga wada hadlay. Wilhelm Röhrig, UBSKM, xitaa wuxuu sheegay inuu sidoo kale ka warqabo dilka carruurta.
LAMBARO, XOGTA, Xaqiiqooyinka
In kabadan 3 milyan oo caruur ah ayaa hada kujira gacanta maxaabiista (tirada kiisaska aan lasoo sheegin waxay u badan tahay inay aad uga badan yihiin, si kastaba ha noqotee). Warshada ka shaqeysa ku xadgudubka caruurta sawirada iyo muuqaalada $ 30 bilyan (Tirada kiisaska aan la soo sheegin waa inay sidoo kale aad uga sarreeyaan halkan) waa in lagu shubaa.
MEEL KASTA AY KU DHACDAA - KELIYA MA AHA AAGAGAHAYGA!
Dad badan ayaa wali aaminsan tan. Laakiin tirooyinku waxay ku hadlaan luuqad kale: Xadgudubka galmada carruurta ayaa dhexdeenna ah. Qayb aan loo baahnayn oo ka mid ah bulshadeena oo ku jirta miisaan ka dhigaya hadal la'aan iyo xanaaq - waana inay nagu dhiirrigeliso inaan wax falno.
Jarmalka gudaheeda waxaa si rasmi ah uga jira 15,000 oo xayeysiis ah oo xadgudubka caruurta ah, tirada kiisaska aan la soo sheegin ayaa aad uga badan. Qiyaasaha WHO ayaa soo jeedinaya inay tahay ilaa 1 milyan gabdhaha iyo wiilasha ay saameysay ee Jarmalka, haddii mid ka mid ah 18 milyan Caruurta iyo dhalinyarada ku nool Yurub.
Fariiso fasal kasta oo iskuul ah oo ku yaal Jarmalka 1-2 carruur ahkuwaas oo ay saameeyeen xadgudubka galmada.
Ku saabsan 9 ka mid ah 10 kiis xadgudubka caruurta wali lama oga.
80-90% dambiilayaasha ayaa ah lab ah, 10-20% dumar ah.
URURADA ILAALINTA ILMAHA
Si tan loo sameeyo, waxaan la kaashannaa ururada sida Thorn.org, oo ay wada aasaaseen Demi Moore iyo Ashton Kutcher ama the Howlgal Wadada Tareenka dhulka hoostiisa ah OUR by Tim Ballard, kaas oo horey uga sii daayey in ka badan 1300 oo caruur ah afduubka iyo ururada kale ee ilaalinta caruurta ee gudaha iyo dibada.
Sidoo kale waa dalabkeenna in sharcigii xaddidnaanta dib loogu noqdo gadaal. HAWEEN KASTA IYO NIN Kasta oo la kulmay xadgudub cunug yaraan waa inuu helaa fursad uu ku soo wargaliyo kan ama kan wax tabanaya.
Dhammaan kiisaska xadgudubka sawirrada waa in lagu wargeliyaa Interpol, BKA ama mas'uuliyiinta kale oo ay wax ka qabtaan iyaga, taas oo hadda lagu sameeyo wax ka yar 10% kiisaska. Tan awgeed, ka Shuruucda haynta xogta ayaa la beddalaa sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan, maxaa loogu talagalay siyaasad ayaa loo yeeraa. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa cawaaqibta sharciga. Iswiiska gudahiisa, ganaaxyada ama xukunada la laalay ayaa wali lagu soo rogi karaa haysashada sawirada xadgudubka caruurta. Jarmalka gudahiisa, dukaanka dukaanka waxaa suuragal ah in lagu ciqaabo mid ka daran kan xadgudubka geysta.
Gudaha Poland tuurista kiimikada khasabka ah ayaa la soo saaray. In kasta oo ay tani u muuqato mid ba'an, ugu yaraan in ka badan 50% dhammaan dembiilayaasha ayaa dib u soo noqnoqda. Halkan, sidoo kale, siyaasiyiinta waxaa laga codsanayaa inay qaadaan tallaabooyin ku habboon oo qasab ah inta lagu jiro haynta ama daaweynta si dambiilayaasha ay u helaan daryeel maskaxeed oo habboon. Waa sheeko aan dhammaanayn oo u baahan in la joojiyo ASAP!
Ka-hortagga waa mid ka mid ah welwelka ugu weyn. Waxaan taageereynaa qabashada riwaayadaha xanaanooyinka iyo iskuulada oo caruurta tusaayo in jirkooda ay iyagu leeyihiin oo kaliya.
Waxaan ka shaqeyneynaa adduunka oo dhan "Amber Alert“Sidaas darteed, sida Mareykanka oo kale, kiis kasta oo afduub waa la soo sheegi karaa. Kani waa farriin otomaatig ah iyo digniin digniin ah oo daqiiqado gudahood lagu soo bandhigi karo taleefan kasta oo gacmeed dhammaan dadka ku jira meel u dhow goobta afduubka. Tani waxay la muuqataa astaamaha ilmaha iyo sidoo kale sharaxaad iyo faahfaahinta afduubaha (tusaale ahaan taarikada baabuurta).
Qareenno gaar ah iyo hay'adaha kor ku xusan, waxaan si firfircoon uga caawineynaa sidii aan uga badbaadin lahayn carruurta halista ugu jirta dambiilayaasha. Intaa waxaa dheer, waxaan si firfircoon u maxkamadeynnaa dambiilayaasha si ay u helaan ciqaabtooda saxda ah dhibbanayaashana ay la kulmaan caddaalad
95% tabarucaadaadu waxay toos utagaan ilaalinta caruurta!
HALKAN KUGU BIXI KARO
© 2021 Gacmaha---off.org . Dhammaan waa la keydiyay
Kusoo Biir Dhacdada